Amaholide e Israyeli ubhekwa eqolo izivakashi izindawo. Ngakho-ke, hhayi wonke umuntu angakwazi ukukhokhela uhambo kuleli zwe emangalisayo. Kodwa kungenzeka ukuya Israyeli ngo-February, lapho travel amaphakheji zitholakala.
Weather Israyeli ngo-February izinsuku ezahlukene lina, kodwa izinga lokubanda sinokuhlasela efudumele. Ukukhethwa lapha ukwenza izifunda eseningizimu yaleli zwe, okuyizinto eseduze laseningizimu. Kulezi zifunda kukhona izinsuku enkulu ezomile futhi libalele.
Kwabanye, uhambo Israyeli ngo-February, kubhekwa akanangqondo. Noma kunjalo, ubusika Israeli wehlukile Russian. Ngakho-ke, abahambi bethu ukuqonda ebusika Israeli akanjalo njengoba abantu bendawo. Ngokwesibonelo, e Tel-Aviv futhi Netanya umoya eliwu 17, futhi ngezinye izikhathi kuze 21 ° C, futhi ebusuku is sehliselwe degrees 11.
EJerusalema namuhla thermometer uphawu isilinganiso ifinyelela 14 ° C, ebusuku emoyeni selehlile 8 degrees. Ngo Tiberias futhi Haifa ngokuvamile thermometer 16 ° C. Olufudumele Eilat - lokushisa lapha 20-22 ° C, ngemva oLwandle Olubomvu njalo zihlukaniswa okushisa aphakeme. Kodwa noma kunjalo, kwenzekani ku-Israyeli ngo-February, ukuze babe laye ukuthatha windbreaker kanye ijezi.
Yiqiniso, ebusika ubhekwa le enomoya kwa-Israyeli. Kodwa uzokwenza kufanele kuphawulwe ukuthi imini nobusuku kulo lonke izwe ubambe plus-amamaki. Okukhishiwe kwezifunda zezintaba, lapho iqhwa uwela njalo. Ngakho, ukuthenga kuyiwe Israyeli ngo-February, kululekwa ukukhetha iholide ezifanele.
Phakathi nenkathi ehlobo kulelizwe ukuya abahambi sinombono aphumula ngosuku zokungcebeleka zayo eziningi. Kokubona izinkambo kwa-Israyeli ngo-February ikakhulukazi okuhloswe ukuvakashela pilgrimage amasayithi kanye ezikhangayo lasendulo.
Ngokombono izivakashi eziningi, singaphetha ngokuthi kwaba ngo-February, ungakwazi ukujabulela ngokuphepha izinto eJerusalema, azulazule emigwaqweni ethule waseNazaretha, ukuze shí ukuphila okuthakazelisayo Tel Aviv futhi uphumule ogwini Eilat. Ukuthatha noma cha ukuletha ukugeza amasudi - ukunquma izivakashi ngayinye. Kodwa ukuya oLwandle iMedithera ebusika, kubalulekile ukuba ube uqeqeshwe kahle ukwenza kanjalo. Ukuya Israyeli ngo-February futhi waphupha ngesikhathi esifanayo ukuchitha iholide ogwini, kungcono ukuya oLwandle Olubomvu.
Lokhu resort ngabaningi ngokuthi "parele" lika-Israyeli, ngoba lapha ngesevisi okusezingeni eliphezulu ezingeni ungakhululeka ngasiphi isikhathi sonyaka. Futhi ngempela, eningizimu imele isimo sezulu esifudumele kakhulu, nezimvula iyivelakancane.
Isilinganiso air lokushisa emini futhi izinga lokushisa kwamanzi isilinganiso usufinyelela uphawu 22 degrees. Kodwa ezifudumele namanje kuwufanele ukuletha kanye. Ngenxa Februwari ngokuvamile umoya, emoyeni ebusuku epholisa degrees 10. Izivakashi eziningi beze Eilat ekupheleni ebusika, kwaba ngo-February, ukujabulela Sunbathingkuva ebhishi. Kodwa zethusi Tan lapha akufanele ukubala. Umkhawulo ukuthi ingatholakala - amnyama isikhumba tone.
Ezinye izivakashi ngamabomu ingaya ka-Israyeli ukuchitha isikhathi oLwandle Olufile. lokhu lonke ichibi kusiza ekudambiseni ukucindezeleka, balahle becabanga imicabango emibi futhi bathuthukise impilo yabo. Kodwa ngo-February izinga lokushisa lamanzi wasoLwandle Olufile kuziwa degrees 18 futhi ekushoniseni inikeza umphumela akhuthazayo emzimbeni iyonke.
Ngokombono abahambi kuyacaca ukuthi lapha weza ukuze aphumule, kodwa kancane kakhulu kuka ehlobo. abahambi abanolwazi belulekwa ukuba uthathe esitsheni ngekhava zibe nzima nge-zinhlayiya usawoti ukuthi ingalandwa eduze nogu. Lezi zinhlayiyana usawoti musa ihluke naleyo edayiswa ezitolo izivakashi. Uma uya ngqo uze uyofika oLwandle Olufile, ungathenga uhambo lwamasonto amabili kwelinye Spa Resort Ihhotela Ein Bokek. Labo ukuphumula nezinye zokungcebeleka ka-Israyeli, ungathenga uhambo lwamahora amabili ngezinyawo yoLwandle Olufile. uhambo okunjalo zidayisa noma ihhotela noma izinkampani eziningi zokuhamba.
Ramat Shalom ngo-February
Kukhona zezivakashi kuleli zwe nakwezifudumele uhlobo Mediterranean ukuza ukuchitha iholide lakho at ski resort ku Ramat Shalom, esemgwaqweni ku iphuzu esiphezulu kuleli zwe - eNtabeni iHermoni.
resort amahhotela enganikeza ezingeni lelisetulu service kanye amakamelo amahle. Ukuze induduzo engcono zezivakashi entabeni wabeka amathrekhi akhethekile zifakwa ngamakheshi ifakwe. I zokushushuluza eqhweni akuzona eziyinkimbinkimbi kakhulu, futhi bangakwazi ukudlula kalula nabantu kancane amakhono slalom.
Kufanele kuqashelwe ukuthi kukhona inqolobane phezu Insimu yaseHermoni. Ngakho-ke, entabeni, ungabona nendawo ebukeka ngezindlela ezihlukahlukene ezimangalisayo nezimpophoma. Kepha u-Israyeli - ezweni kwezinhloso zenzuzo, ngakho abathandi yomlando futhi lidala kangakanani, namandla yaseHermoni ungavakashela emzini Ramla, uNimrode Fortress kanye wineries we Golan Heights lasendulo.
Kufanele kuqashelwe ukuthi inani elikhulu abahambi wathumela ngokukhethekile ku-Israyeli ngo-February. Izibuyekezo kakhulu kubo nomdlandla kakhulu. Ngokwesibonelo, abantu bakithi wabhala ukuthi bazoyishaya Israyeli kwaba ngo-February, lapho azikho izixuku zezivakashi eziningi. Ngalesi sikhathi, kalula ubone izinto zeJerusalem ngaleyondlela ngeke siphinde Haifa, uphumule ogwini loLwandle Olufile futhi enyuka zonke izinhlobo ezindaweni ezithakazelisayo.
Ubani efika kwa-Israel maphakathi no-February, abahambi bathi kubo bonke esikhathini sokuhlala kuleli zwe, izinsuku babe libalele futhi efudumele. Kodwa ebusuku lokushisa air lehla 6 degrees Celsius. Izivakashi weneliseka yokuthi hambo ezihlukahlukene kungenziwa kalula ithengwe ngasiphi ehhotela.
Abantu abaningi ukuhamba ukuze Israyeli ngo-February, ukuze uqaphele iphupho lakhe - ukuze shí eMfuleni iJordani. Nokho, kufanele kuphawulwe ukuthi kukhona ukuwasha izingubo ezikhethekile, ezidayiswa ngqo ngasemfuleni amashekeli 25. In the izitolo izivakashi ukubaluleka kwalo lehla ngamashekeli angu-20, futhi ngo yisiphi isitolo ezisemadolobheni angathengwa 5 amashekeli. Ngenyanga yokugcina nobusika, lapha kufika abantu abaningi ukucwilisa emfuleni ongcwele, noma ubambe emkhubeni sikhathi ngokuphathelene nobhapathizo.
Izinzuzo ukuphumula ngo-February
Februwari - ngenyanga kangcono abavakashi esisebenzayo. Okokuqala, kakhulu ziyancipha izindleko izimvume. izinkampani Izikhangibavakashi ukunikeza amakhasimende inani elikhulu izipesheli imali eningi ngamanani akhokhelekayo. Kufanele bazi ukuthi kwenzekani ku-Israyeli ngo-February, kungenzeka imadlana ukuphila ehhotela futhi uthenge ithikithi phezu ukwelashwa spa. Ekupheleni ubusika, ngisho izitolo izivakashi ukwenza izaphulelo abalulekile kumakhasimende abo. Ngokuvamile, lapho sasihlose ukuchitha iholide e Israyeli ngo-February, ungakhululeka nge ohambelana isabelomali induduzo.
Bhala-off amafutha kanye zokugcoba. Zezindleko noma imali?
Lapho zokushushuluza nasezindaweni ezizungeze eMoscow?